ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ပြန်လည် တူးဆွခြင်း (၃)
ပြန်လည် တူးဆွခြင်း (၃)
ဒီဆောင်းပါးကို မဖတ်ခင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့စာဖတ်သူများကို ကြိုတင် အသိပေးချင်တာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေစဉ် အချိန်အတွင်းမှာရော၊ ပြည်ပရောက်ရှိနေစဉ် ကာလအတွင်းမှာရော သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြင်ခဲ့ ကြားခဲ့ ကြုံတွေ့ ရတာလေးတွေပေါ်မှာ အခြေခံမူတည်ပြီး ဒီဆောင်းပါးကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာတော်ကို အရည်အသွေးပြည့်မီစွာနှင့် ထာဝရ ရှင်သန်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နေအောင် ထောက်ပံ့ကူညီစောင့်ရှောက်လိုတဲ့ ဆန္ဒအမှန်နှင့် ဉာဏ်မှီသလောက် သုံးသပ်ရေးသား အကြံပြုဆွေးနွေးထားခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကို အခြေခံပြီး သာသနာတော် သန့် ရှင်းစင်ကြယ်ရေးနှင့် ခေတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာနဲ့ တိုးတက်ထွန်းကားရေးကို အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်ဖို့ အတွက် Discussion Topic တစ်ခုသဘောမျိုး ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းပါတယ်။
တချို့ ဖတ်ပြီးသူများက ဒီဆောင်းပါးကို သဘောကျအားပေးပြီး အပြုသဘောဝေဖန်ပေးကြသလို တချို့ ကလည်း ဒီလိုမျိုး မရေးသင့်ကြောင်း ဝေဖန်အကြံပြုကြပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးအပေါ် အကြံပြုပေးကြသူများအားလုံးကို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးကနေတဆင့် ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာအတွက် သင့်တော်မယ့် အဖြေကို ဆက်လက်ပြီး အားလုံးဝိုင်းကူ စဉ်းစားဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
မိတ်ဆွေများရဲ့ ဆောင်းပါးအပေါ်ကွန်မန့် များကို ပို့ စ်များအဖြစ် ဆက်လက် ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အားလုံးကို လေးစား ကျေးဇူးတင်လျက်
ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား?
ဆရာတော် သံဃာတော်တွေ အများဆုံး ရေးကြ ဖတ်ကြတဲ့ ဒီလို မဂ္ဂဇင်းမျိုးမှာ တပည့်တော် လူဝတ်ကြောင်က အူကြောင်ကြောင်နှင့် မဆီမဆိုင် ဆောင်းပါးလာရေးတဲ့အတွက် သည်းခံခွင့်လွှတ်တော်မူပါရန်နှင့် တကယ်လို့ များ အမှားအယွင်းတစ်စုံတရာများရှိခဲ့ပါလျင်လည်း မေတ္တာ ကရုဏာရှေ့ ထားပြီး အမိုက်အမဲအဖြစ် ဗွေမယူဘဲ သည်းငြီးခံတော်မူပါရန် တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါတယ် အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့ ဘုရား။
၂၀၀၉ ခု။ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ တစ်ရက်တော့ အားအားရှိတာနှင့် မြို့ ထဲက ဘုန်းဘုန်း တစ်ပါးဆီ အလည်သွားရင်း စကားစမြည် ပြောဆိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ က အကြောင်းအရာ တော်တော်များများကို ဦးဇင်းနှင့် ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပြီး Brain Storming တွေလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ ပြည်တွင်းက သံဃာတော်တွေ အရေးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဒီလိုမျိုးလေး လုပ်ကြည့်ကောင်းမလား ဆိုပြီး နှစ်ဦးသား ဆင်ကြံကြံမိခဲ့ကြပါတယ်။
ဟိုးတစ်ပတ်က အယ်ချုပ်ကြီး ဓမ္မဂင်္ဂါနှင့် အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ တော့ သံဃာတော်တွေရဲ့ ပညာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကိုယ်တော်က သူပို့ စ်တင်နေတဲ့ နေရဉ္ဖရာမှတ်တမ်းတွေကို သွားဖတ်ကြည့်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်နှင့် ဒီကဦးဇင်းလေးတို့ ပြောဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပါနေတာကို တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ နောက် မမဝေ (MMWAI) အကြောင်းကိုပါ သိလိုက်ရပါတယ်။ အရင်က ဒီလို မမဝေ လိုအဖွဲ့ အစည်းမျိုး ရှိနေလိမ့်မယ်လို့မသိထားခဲ့ပါဘူး။ အခု ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ တယ်ဟုတ်ပါလားလို့ချီးကျူးထောမနာ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒီအကြောင်းလေးတွေ အားလုံးစပ်ဆက်ပြီး ပို့ စ်တစ်ခုတော့ရေးတင်အုံးမယ်စိတ်ကူးနေတုန်း မမဝေနှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းအတွက် စာမူတောင်းနေတာတွေ့ လိုက်တော့ ငါလည်း ၀င်နှမ်းဖြူးလိုက်မဟဲ့လို့အယ်ချုပ်ကိုယ်တော် အားကိုးနှင့် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သံဃာတော် အရှင်မြတ် လေးသိန်းပတ်ချာလည်လောက် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီလေးသိန်းသော သံဃာတော်များအားလုံးဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ချမှတ်ခဲ့တဲ့ သုံးရပ်သော သာသနာတော်ကို မိမိတို့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရွက်ဆောင်တော် မူနေကြပါသလားလို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကမေးလာခဲ့လျင် ကျွန်တော် ဘယ်လိုဖြေသင့်ပါသလဲ။
သံဃာတော်များအနေနှင့် စာသင်စာချတဲ့ ပရိယတ္တိလုပ်ငန်းကို လုပ်ချင်လုပ်၊ သို့ မဟုတ် သံသရာမှ မိမိရော သူတစ်ပါးပါ လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ ပဋိပတ္တိကို လုပ်ချင်လုပ်။ ဒီနှစ်မျိုးကို မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ ဆိုထားသော်လည်း အကြောင်းကြောင်း အဖုံဖုံတွေကြောင့် ဒီနှစ်မျိုးနှင့် ကင်းကွာနေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေ ဒီလေးသိန်းသော သံဃာထုထဲမှာများ ရှိမနေနိုင်ဘူးလား။ တကယ်လို့ များ ရှိနေခဲ့ရင် သူတို့ မှာ ဘယ်လိုမျိုး အခက်အခဲ၊ အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေလို့ လဲ။ ဘယ်လိုမျိုး အဆင်ပြေသွားအောင် ဒီသံဃာတော်တွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲ။ နောက်ပြီး ပရိယတ် ပဋိပတ်မလုပ်တိုင်းကော ဒီသံဃာတော်တွေကို သာသနာတော်အတွက် လောကအတွက် အချည်းနှီးလို့ပြောရတော့မလား။
သံဃာတော်များ သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်ရောက်လာကြရာမှာ ကျောထောက်နောက်ခံ Background တွေ မတူညီကြသလို၊ ရည်ရွယ်ချက် ခံယူချက်တွေလည်း မတူညီနိုင်ကြပါဘူး။
ပထမတန်းစား အနေနှင့်ကတော့ သာသနာတော်ကို ကြည်ညိုလို့ ၊ တကယ်ကို သဒ္ဓါတရားထက်သန်အားကောင်းပြီး ၀င်လာကြတဲ့ သံဃာတော်တွေပါ။ ဒီသံဃာတော်များနှင့်ပတ်သတ်ပြီးတော့ အထွေအထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဘုန်းကြီးလုပ်ချင်လို့ ကို လုပ်တာဆိုတော့ ဘုန်းကြီးဖြစ်ရင် ဘုန်းကြီးအလုပ်ကို လုပ်ကို လုပ်တော့မှာပါ။
ဒုတိယတစ်မျိုးက အောက်တန်းအဆင့်အနေနှင့် သာသနာတော်မှာ အနေချောင်လို့(ဒါကသူ့ အထင်ပေါ့) ၀င်လာတဲ့ သံဃာတွေပါ။ သူတို့ ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့်ဘဲ နေလို့ ရသလောက် သံဃာ့အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ နေနေကြမယ့် သူတွေပါဘဲ။
နောက်တတိယတစ်မျိုးကတော့ သာသနာထဲမှာနေရတာလည်းပျော်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိယတ်နှင့်ပဋိပတ်ကို ဒီလောက်ကြီးအားမသန်ဘဲ လူမှုအကျိုးပြုနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအထူးပြင်းပြနေကြတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အကြောင်းမညီညွတ်မှုနှင့် အခွင့်အလမ်းမပေါ်လာမှုတွေကြောင့် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင်ဘဲ ပရိယတ်လိုလို၊ ပဋိပတ်လိုလိုနှင့် အချိန်ကုန်လွန်အောင် နေနေကြရတဲ့ သံဃာတော်တွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်စတုတ္ထတစ်မျိုးကကျတော့ မိဘနှင့်မိသားစု၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းက စီမံလို့ဘုမသိဘမသိနှင့် သာသနာတော်ထဲရောက်လာကြတဲ့သံဃာတွေပါ။ ဒီအမျိုးအစား သံဃာတော်တွေကိုတော့ တော်တော်လေးတွေ့ ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ တချို့ လည်း စိတ်ပါသွားပြီး ပထမတန်းစားအုပ်စုထဲ ၀င်သွားကြတာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ သာသနာမှာလည်းမပျော်၊ လူလည်းထွက်လို့ မရနှင့် တော်တော်လေး အဆင်မပြေဖြစ်ကြရတဲ့ အုပ်စုပါ။
တချို့ သော သံဃာတော်များဟာ ငယ်ငယ်က မိဘက ချို့ တဲ့နွမ်းပါးတဲ့အတွက် သားသမီးကို ကျောင်းလည်း မထားနိုင်၊ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ဖို့ လည်း ခက်တော့ နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိသားလည်း စာတတ်၊ စားဖို့ သောက်ဖို့နေဖို့ အတွက်လည်း မစိုးရိမ်ရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားပါတယ်။ ဒီလိုနှင့် ဒီသားလေးဟာ သာသနာ့ဘောင်မှာ ဘုန်းကြီးစာတွေသင်ရင်း ကိုရင်ဘ၀ကနေ ရဟန်းဘ၀တက်၊ စာမေးပွဲတွေအဆင့်ဆင့်ဖြေရင်း အောင်တာလည်းရှိ၊ မအောင်တာလည်းရှိနှင့် သာသနာ့ဝန်ကို မနိုင်မနင်း ထမ်းရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရဟန်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒက တစ်ခုဖြစ်နေမှာပါ။
အိမ်မှာ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဆွမ်းခံကြွတဲ့ ကိုယ်တော်လေးက ပြောဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်ကို တော်တော်လေးခင်တော့ သူကစိတ်ထဲရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲပြောတယ်။ တကယ်လို့ များ အခုအချိန်မှာ တစ်နေရာရာက ထီသော်လည်းကောင်း အမွေလိုမျိုးသော်လည်းကောင်း ပစ္စည်းဥစ္စာတော်တော်လေးရခဲ့ရင်တော့ လူထွက်မှာဘဲတဲ့။
တခါက ရန်ကုန်သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးနှင့် စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီကိုယ်တော်က သူ့ သူငယ်ချင်းရဟန်းတစ်ပါး ကျောင်းကိုလာလည်တဲ့ ဂျပန်မနှင့်တွေ့ ကြ၊ ကြိုက်ကြပြီး လူထွက်လို့အိမ်ထောင်ပြု ဂျပန်လိုက်သွားရတဲ့အကြောင်းကို မြိန်ရည်ရှက်ရည် ပြောပြတာကို နားထောင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒီပြောနေတဲ့ ရဟန်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေများတွေးနေမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်မိခဲ့ဖူးပါတယ်။
တလောကလည်း နိုင်ငံခြားမှာ မဟာတန်းတက်နေတဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါး လူထွက်ချင်လို့အကြံအိုက်နေတာလေးကို ကြားလိုက်မိပါသေးတယ်။ လူထွက်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်လို ရပ်တည်နေထိုင်မလဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘယ်လို Dealing လုပ်မလဲ။ ဒီမေးခွန်းတွေနှင့် ယောင်ချာစိုင်းရင်းနှင့်ဘဲ သာသနာထဲ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေကြတဲ့ သံဃာတော်တွေ ဘယ်လောက်များများ ရှိနေမလဲဆိုတာ သုတေသနလုပ်ချင်စရာ အကြောင်းကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။
Risk မယူရဲတာ ဘာကြောင့်များလဲ
ဘုန်းကြီးအဖြစ်ကနေ အကြောင်းကြောင်းတွေနှင့် လူဝတ်လဲလိုက်ကြပြီဆိုရင် အဓိကရင်ဆိုင်ကြရတာ ပတ်ဝန်ကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းက လူတွေအများစုရဲ့mindset မှာလည်း ဘုန်းကြီးလူထွက်ဆိုရင် Look Down နဲနဲလေးလုပ်ချင်ကြသလားလို့ ။ လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဒီလူထွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံမှုမျိုးနှင့် လက်ခံဆက်ဆံနိုင်မှုအားနည်းတဲ့အခါ လူထွက်လာရတဲ့သူတွေမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှုမျိုး ဖြစ်စရာရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြဿနာက လူဝတ်ကြောင်ဘ၀နှင့် စားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေ စတင်ရုန်းကန်ရတော့တဲ့အခါမှာ တစ်သက်လုံးက လူမှုကိစ္စတွေနှင့် ကင်းကွာလာခဲ့တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေကတော့ အထိုက်အလျောက်က ကြုံကိုကြုံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာကတော့ စားဝတ်နေရေးရပ်တည်မှုအတွက် ပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်မှုတွေ မပြည့်စုံတော့ ဘ၀ရပ်တည်မှုမှာ အခက်အခဲတွေ့ ကြရတော့တာပါ။ အဲဒီထဲမှာမှ လူနည်းစု ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်လောက်ကတော့ သူတို့ နှင့်သင့်တော်ဆီလျော်တဲ့ နေရာဌာနမျိုးမှာ အလုပ်ရရှိအဆင်ပြေသွားကြတာမျိုးတော့ ရှိပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ဒီလူဝတ်ကြောင်ဘ၀ နေထိုင်ရပ်တည်အသက်မွေးရတဲ့ Risk ယူရမှုဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘာသာရေးစာပေလေ့လာဆည်းပူးအားထုတ်မှုတွေနှင့် အချိန်ကုန်လွန်လာခဲ့ကြတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးအတွက်တော့ တော်တော်မလွယ်ကူတဲ့ စွန့် စားမှုတစ်ခုပါဘဲ။
တကယ်လို့ များ သံဃာတော်တွေကို ကိုရင်ဘ၀ထဲမှာကတည်းက ပရိယတ္တိစာပေသင်ယူလေ့လာခြင်းအပြင် လောကီကျောင်းများမှာသင်ကြားနေတဲ့ ဘာသာရပ်တွေထဲက တစ်ချို့ အရေးကြီးတဲ့ ဘာသာများကို အချိန်နည်းနည်း ခွဲပေးပြီး သင်ကြားပို့ ချလိုက်လျင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ တွေးကြည့်မိပါတယ်။ ဥပမာ ကိုရင်ငယ်ဘ၀မှာ သင်္ချာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာကို နည်းနည်းစီ သင်ရိုးထဲထည့်ပြီး သင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ ။ နောက်အတန်းနဲနဲကြီးလာတဲ့ ကိုရင်ကြီးအရွယ်ကျတော့ ရူပဗေဒအခြေခံ၊ ဓါတုဗေဒအခြေခံ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ပထ၀ီဝင်အခြခံ လေးတွေ ထည့်သင်ပေးထားလိုက်မယ်။ ဒီလိုနှင့် နှစ်တိုင်းမှာ အပြင်လောကီစာကို နည်းနည်းချင်းစီ ထည့်ထည့်သင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ဒီကိုရင်ငယ်ဟာ လောကီဘာသာရပ်တွေနှင့် စိမ်းမနေတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပိုင်းအတန်းကြီးလာတာနှင့်အမျှ အဆင့်မြင့်အင်္ဂလိပ်စာတွေ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေ၊ စာရင်းအင်းပညာ အခြေခံတွေကိုပါ Minor ဘာသာရပ်တွေအဖြစ်နှင့် လေ့လာခိုင်းမယ်။ နောက်ပိုင်း ပထမကြီးလို၊ ဓမ္မာစရိယလို ကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံရေး၊ စိတ်ပညာ၊ အတွေးအခေါ်ပညာ၊ စီမံခန့် ခွဲမှုပညာရပ်တွေကို ထည့်သွင်းလေ့လာစေမယ်။
ဒီလိုသာ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီသံဃာတစ်ပါးအနေနှင့် ကိုရင်ငယ်ဘ၀ကနေ ရဟန်းပျိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်တလျှောက်လုံးမှာတင်ကိုဘဲ သူ့ ဖာသာ သူ ချိန်လို့ ရနိုင်တယ်။ သူ ဘယ်ဘက်ကို အားသန်လဲ။ လောကီလား၊ လောကုတ်လား။ လောကီဘက်အားသန်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်မှာကတည်းက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာကို ဖိပြီးလေ့လာထားလို့ ရပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုး ဘာကောင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ တကယ်သာသနာတော်မှာပျော်ပြီး သာသနာပြုစိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေအတွက်ဆိုရင်လည်း သူ့ အနေနှင့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရာမှာ လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာပညာ၊ စိတ်ပညာ၊ အတွေးအခေါ်ပညာ စတဲ့ ပညာရပ်တွေကို ပရိယတ္တိသင်ယူရင်း တခါတည်း လေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်ကြတဲ့ သံဃာတွေအတွက်ဆိုရင်လည်း လိုအပ်တဲ့ စီမံခန့် ခွဲမှုပညာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာတို့ ဟာ သူတို့ လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အခြေခံအနေနှင့် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပြန်ပါတယ်။
ဒီတော့ သာသနာ့ဘောင်မှ မပျော်တော့တဲ့ သံဃာတော်များ အတွက် လူ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်း ၀င်ရောက်ရပ်တည်ရှင်သန်ဖို့ အတွက်လိုအပ်မယ့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက် Capacity Building သင်တန်းတွေစီစဉ်ပြီး နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်များက ပို့ ချသင်ကြားပေးမယ်။ လူထွက်ပြီး သင်တန်းကို အရင်မတက်မဖြစ် တက်ကြ။ အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ ယူရမှာပေါ့။ ဒီသင်တန်းတွေကပြီးသွားတဲ့ သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဌာနတွေက အလုပ်နေရာတွေစီစဉ်ပေးမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ချင်ရင်လည်း လုပ်ကြပေါ့။
နောက်ပြီး လူ့ အဖွဲ့ အစည်းက လူတွေကိုလည်း ဘုန်းကြီးလူထွက်ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် စာနာနားလည်မှုများနှင့် လက်တွဲဖေးမကူဖို့ အတွက် Educate လုပ်ပေးမယ်။ နဲနဲတော့ အချိန်တစ်ခုယူရမှာပေါ့လေ။
လူထွက်ချင်တဲ့ သံဃာတွေအနေနှင့် ဒီလိုသာစီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင် ဘာဘဲပြောပြော သူတို့ တွေ တွေးပူနေတဲ့ ကိစ္စအတော်များများ ပြေလည်သွားမှာတော့ အမှန်ပါဘဲ။ မိမိကိုယ်မိမိ စိတ်ချယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀နှင့် လူ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်းကို ရဲရဲ တိုးဝင်နိုင်သွားမယ်။
ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ချင်တဲ့ သံဃာများအတွက်လည်း သူတို့ လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သတ်တဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုတွေကို ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် သီးခြားသင်တန်းများ၊ Workshop များ ပြုလုပ်ပေးပြီး နည်းပညာဖြန့် ဖြူးပေးမယ်။ Donor တွေနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီသံဃာများမှာလည်း သူတို့ ရဲ့ရင်ထဲက Talent တွေကို မြေတောင်မြှောက်ခွင့် ရသွားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ စဉ်းစားရမှာ သံဃာတော်တွေ သာသနာ့ဘောင်ထဲကနေထွက်တဲ့သူကထွက်၊ သုံးတန်သောသာသနာ့တာဝန်ကို မထမ်းဘဲ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တဲ့သူကလုပ်ကြတော့ သာသနာတော်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် စဉ်းစားကြရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် ယခုလက်ရှိအနေအထားအတိုင်းဆိုရင်ကော သာသနာတော်မှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများနိုင်ပါသလား။ သုံးတန်သော သာသနာကို စိတ်လက်ရွှင်ပျစွာ လိုလိုချင်ချင် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သံဃာအရည်အတွက် နှင့် သာသနာမှာအခြေအနေအရပ်ရပ်တွေကြောင့် မပျော်ပိုက်ဘဲ သာသနာ့ဝန်လည်း မဆောင်ဘဲ နေနေကြတဲ့ သံဃာအရည်အတွက်။ ဒီ နှစ်ခုကို ယှဉ်ထိုးစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် အဖြေတစ်ခု တော့ ထွက်လာမှာပါ။
ဒီတော့ အရည်အတွက်မှသည် အရည်အချင်းဆီသို့ သွားမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် အရည်အချင်းမှသည် အရည်အတွက်ဆီသို့ သွားမှာလား။ ဒါကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
အောက်ထစ်ဆုံး အနာဂါမ်ဖြစ်ပြီးမှသာ သာသနာတော်မှာ စိတ်ချစွာမြဲနိုင်တယ်။ အောက်အရိယာအဆင့်တွေတောင် သာသနာတော်မှာ အမြဲမပျော်နိုင်ဘူးလို့ဒီလို တရားစကားမှတ်သားမိတာရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ များ သောတာပန် သံဃာတစ်ပါး လူထွက်သွားတာဟာ သာသနာတော်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါ့မလား။ သာသနာတော်ကြီး ဆုံးရှုံးမှု အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုဟာ ဘယ် Criteria တွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တွက်ချက်မှာလဲ။
သာသနာကို ခဏထားလို့နိုင်ငံအတွက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုပါတော့။ နိုင်ငံအတွက် လူသားအရင်းအမြစ်စွမ်းအားထဲက လေးသိန်းကျော်ကို သာသနာတော်အတွက် အသုံးပြုလှူဒါန်းထားတယ်။ တကယ်လို့အဲဒီလေးသိန်းဆီက သာသနာတော်စည်ပင်ထွန်းကားပြန့် ပွားဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့လုပ်အား အရင်းအမြစ်ကိုလည်း အပြည့်အ၀မရသလို ဒီဘက်က နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်မှာလည်း စွမ်းအားလစ်ဟာမှုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်..။
တကယ်လို့ သာသနာ့ဘောင်မပျော်တဲ့ရဟန်း လူထွက်ပြီး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍထဲမှာ သူနိုင်တဲ့တာဝန်ဝင်ထမ်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ သာသနာဘက်မှာလည်း Quality Percentage တက်သွားသလို၊ နိုင်ငံဘက်မှာလည်း HR Percentage အပေါင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပရဟိတလုပ်ငန်း လုပ်ကြမယ့် သံဃာတော်တွေဆိုရင်လည်း ဒီသဘောအတိုင်းပါဘဲ။ သာသနာဘက်လည်း တန်ဖိုးတက်သလို၊ နိုင်ငံအတွက်လည်း အကျိုးထွက်တယ်လို့ ယူဆလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အခုရေးခဲ့တာတွေအားလုံးကတော့ ဒီလိုလုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလားဆိုပြီး စိတ်ကူးကြည့်ရုံသက်သက်ပါ။ စိတ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ချင်တာဘဲ စောင်းပေးထားတာပေါ့။ တကယ့်လက်တွေ့ မှာတော့ လုပ်ကြည့်ရင် လုပ်လို့ ရချင်မှလည်း ရမယ်။ ရရင်လည်း အခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူချည်းဘဲတော့ ဘယ်ဖြစ်လိမ့်မလဲပေါ့နော်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ကိစ္စတစ်ခုကို မျက်နှာစာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲက မျက်နှာစာတစ်ဘက်ကနေ မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့သဘောပါဘဲ။ တခြားလူတွေကလည်း ဒီကိစ္စကို တခြားအမြင်တွေနှင့် မြင်ကြည့်နိုင်ကြအုံးမှာပါဘဲ။ အားလုံးလွတ်လပ်စွာ မြင်ကြည့်တော် မူကြပါကုန်။
ဒီဆောင်းပါးရေးရင်း The Beatles အဖွဲ့ က John Lennon ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Imagine ထဲက သီချင်းစာသားလေးကို သတိရမိပါတယ်။
You may say that I amadreamer.
အားလုံး ချမ်းသာသုခနှင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
၁၅၊ ၁၊ ၂၀၁၀။
(ဤဆောင်းပါးရေးဖြစ်ရန် အတွေးကုန်ကြမ်းများပေးတော်မူသော တိုကျိုမြို့ မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သံဃာ့ရုံးခန်းတာဝန်ခံဆရာတော် အရှင်ဓမ္မဇောတိ နှင့် ဘုန်းဘုန်းဓမ္မဂင်္ဂါ (အယ်ချုပ်) တို့ အား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ရိုသေစွာ ဦးနှိမ်ရှိခိုးကန်တော့လိုက်ပါသည် အရှင်မြတ်တို့ ဘုရား။ )
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:03 AM
အင်မတန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူး လေးပါပဲ
လူ ဆိုတာ ဘယ် အချိန် ဘယ် နေရာ ပဲ ရောက်ရောက် လောက ကို တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း နဲ့ အကျိုးပြု ပြီး ရှင်သန် နေသင့် ပါတယ်။ ရဟန်း ဘ၀ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လူ ဘ၀ နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်သန်ရာ ကိုယ် လုပ် ကြပြီးတော့ ဘ၀ ကို အဓိပ္ပါယ် ရှိရှိ ဖြတ်သန်း နိုင်ကြပါစေ။
ပြန်လည် တူးဆွခြင်း (၂)
ပြန်လည် တူးဆွခြင်း (၁)
Daruma၊ ဓမ္မနှင့် ပစ်တိုင်းထောင် အတွေးများ